आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहका उम्मेदवारको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष तथा ४३ वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो । कूल ४८ पदका लागि २७३ उम्मेदवारको नामावली टुङ्गो लागेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कूल २८२ उम्मेदवारको मनोनयपत्र दर्ता भएकामा नौ उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए
प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पतालमा, पुनः गरियो हेमोडायलासिस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिवार ग्राण्डी अस्पताल गएका छन् । अस्पताल पुगेका ओलीको हेमोडायलासिस गरिएको ग्राण्डी अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे, युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जिकल विभागका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली र प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि अस्पताल आएका जनाएका छन् ।
नेपाली फूटबल टिमका ४ खेलाडी राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले विश्वकप २०२२ को छनोटमा कुवेत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिमका ४ खेलाडीलाई अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै बर्खास्त गरेको हो ।
बर्खास्त हुनेमा स्टार फर्वार्ड विमल घर्तीमगर, मिड फिल्डर अन्जन विष्ट,अर्का मिड फिल्डर सन्तोष तामाङ र डिफेन्डर दीनेश राजवंशीछन् ।
उनीहरू गएराति २ बजेसम्म ठमेलका विभिन्न क्लबमा रहेको पाइएकाले कारबाही गरिएको एन्फाले जनाएको छ।
माजवादी पार्टीले प्रदेश अनुसार पहिचानमा आधारित साझा अभिवादन गर्ने भएको छ । राजधानीमा शनिवार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेशको पहिचानमा आधरित अभिवादन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले 'जय नेपाल' र नेकपाले 'लाल सलाम' भनेर अभिवादन गर्ने गर्छन । अब समाजवादी पार्टीका नेताहरुले 'जय मधेस' 'जय तमुवान' भनेर अभिवादन गर्ने भएका छन ।
पहिचानमा आधारित अभिवादनमा 'जय मातृभूति' पनि थपिने छ ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले अवदेखि पार्टीको आधिकारिक साझा अभिवादन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समाजवादी पार्टीले मंसीर देखि चैतसम्म संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान संचालन गर्ने भएको छ ।
सरकारबाट अलगिने वा सरकारमा बसिरहने भन्नेवारे आइतवार बस्ने पदाधिकारी बैठकले टुंगो लगाउने प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल युनाइटेड अरब इमिरेटस्का प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री मोहम्मद बिन रसिदको औपचारिक निमन्त्रणामा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भएको छ । दुबईमा उहाँले द्विपक्षीय उच्चस्तरीय छलफल तथा भेटघाट गर्नुका साथै ‘दुबई एयर–शो’मा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
‘एअर–शो’को पहिलो दिन आइतबार हुने उद्घाटन समारोह तथा मुख्य प्रदर्शनीमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आतिथ्यता गर्नेछन् । त्यस्तै उनले त्यहाँका शेख, राजकुमार, दुबई व्यापारिक समाजका नेतृत्व तथा युएई सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग भेटघाट तथा विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नेछन् ।
दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सवको तयारी तीव्र
झण्डै १३ वर्ष पछि गलकोटमा दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सव सञ्चालन हुँदै छ ।
मंसिर ४ गते देखि ११ गते सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारी यति बेला तिव्र पारिएको छ । गलकोट घुम्टे विकास केन्द्र बागलुङको आयोजनमा हुन गइरहेको महोत्सवलाई सफल पार्न अहिले विभिन्न ठाउँमा समुह बनाएर प्रचार प्रसार आर्थिक संकलनलाई दृढतापुर्वक अगाडी बढाईएको छ ।
केन्द्रले गलकोटसँगै देश तथा विदेशमा रहेका गलकोटे तथा बागलुङ जिल्लाबासीसँगको अन्तरकृया तथा भेटघाटलाई सकृयता पुर्वक अगाडी बढाएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमद्वारा सीमा विवाद समाधान गनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकाले राष्ट्रवादको नारा दिएपनि त्योअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुरले शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए। पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको बताए।
'कालापानी हाम्रो हो । महाकाली सन्धिअनुसार पनि कालापानी नेपालको हो', उनले भने, 'सन्धिमा महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको सीमा नदी भनिएको छ ।'
महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पानी आधा भारत र आधा नेपालको भएको उनको भनाइ थियो । भारतले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
घर भत्काउने क्रममा पर्खालले किचेर १ जनाको मृत्यु
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–३ जलजलेमा घर भत्काउने क्रममा पर्खालले किचेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार स्थानीय शान्ती लामाको घर भत्काउने क्रममा बकैया–३ चिसापानीका २७ वर्षीय बुद्ध लामा मोक्तानको मृत्यु भएको हो ।
घर भत्काउँदै गरेका मोक्तान पर्खालले किचेपछि घाइते भएका थिए ।
घाइते मोक्तानलाई हात्तीसुँडे स्वास्थ्यचौकी लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा शुक्रबार राति मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही स्थानका ३५ वर्षीय डिल्लीराम गौतम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार रामनगरबाट ठिमुरातर्फ जाँदै गरेको ना१५प ५१४१ नंको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो ।
मोटरसाइकल पल्टिएपछि घाइते गौतमको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना राति १२ बजे भएको थियो ।